मकैकाे घाेगा लागेन ? क्षतिपूर्ति पाइन्छ
Home banner मकैकाे घाेगा लागेन ? क्षतिपूर्ति पाइन्छ
काठमाडौं– अब बाली उत्पादन नभएमा किसानले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। मकैको घोगामा दाना नलाग्ने, धानको बालामा भुस मात्र हुने लगायतका समस्या देखा परेमा सरकारले क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
जारी हुन लागेको ‘खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७५’ मा क्षतिपूर्ति उपलब्ध व्यवस्था गरिएको छ । किसानले लगाएको वालीको मूल्य बराबरकै क्षतिपूर्ति अब किसानले पाउने भएका छन् ।
छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पुगेको ऐनको विधेयक अनुसार कुनै पनि सरकारी निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेका बीऊविजन वा विधि प्रक्रियाबाट बाली उत्पादन नभएमा सिफारिस गर्ने संस्था निकाय वा फर्मले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ऐनका मर्कामा परेका किसानहरुलाई के कति राहत तथा क्षतिपुर्ति दिने बारे अझै प्रष्ट छैन । तर, कृषि मन्त्रालयका अनुसार क्षतिपूर्तिको मापदण्ड नियमावलीमार्फत् कायम गरिनेछ । त्यस्ता ती निकाय वा फर्मले सिफारिस गरेका बीऊविजन, विधि, प्रक्रिया वा मलको सिफारिस गरेको तरिकाभन्दा फरक किसिमले प्रयोग गरेर बालीको उत्पादन नभएमा क्षतिपूर्ति पाइने छैन।
यसैगरी नयाँ विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार विना भेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियममित पहुँच, भोकबाट मुक्त, खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले दीगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो एेन कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेमा किसानको लागि राम्रो हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
Previous articleखेती योग्य फाँटमा इट्टा उद्योग र बस्ती भरिँदा तरकारी उत्पादन घट्याे
Next articleरुख बिरामी भएपछि स्लाइनमार्फत औषधि दिइँदै (तस्बिरमा)